बिर्खेको लोडसेडिङ्ग डायरी - Afnaisansar
Published: May 18, 2013 by Admin Filed under: Nepali Literatures - 527 Views
'बिजुली आएर हैरान छ दाइ। डोरी लाहुरेले हैरान पारे' जंगेले भन्यो। 'ओइ तोरी लाहुरे भनेको त सुनेको थिएँ। यो डोरी भनेको के हो?' विक्रमले सोध्यो। 'हो दाइ तपाईंले भनेको ठिक हो। अहिले अरब, कतार, मलेसियाबाट आउनेलाई डोरी लाहुरे भन्छन,' जंगेले भन्यो।
टिभीमा कार्टुन नहेर, टिफिन के चाहियो?' बाआमाले भन्ने जमना थिएन।बाल्यकाल यस्तै भो बिर्खेको। कक्षा ५ उत्तीर्णसँगै घर छोड्यो। उसो त कक्षा ५ उत्तीर्ण हुँदा लक्का जवान भएको थिएन। प्वाक्क गाला। मोटेमोटे। लखनी चप्पल, हाफ जाँगे। निलो रंगको कमिज। स्कुलको ड्रेस हो यो। जहिल्यै त्यही भिरेको भिर्यैइ। चेलपार्क मसीको सीसीमा मट्टीतेलमा बाती राखेर टुकी। त्यो सुविधा अलिक तल सानो बजार छेउमा स्कुल भएकाले। सीसीको टुकीमा सेतो कागजले बारेपछि बढि उज्यालो हुन्छ विज्ञान पढ्दा थाहा भयो। कापी च्यातेर टुकीको ज्वाला जाने ठाउँ घेरा पार्योि। टुकीको ज्वालाले कालो हुने। बेलाबेला फेर्नु पर्थ्यो।